Banyere Buddha Trends
E kere Buddhatrends na Montreal, Canada iji nye ụmụ nwanyị si gburugburu ụwa, ikekwe iche dị iche na ìgwè mmadụ ahụ ma gosipụta onwe ha n'ụzọ ziri ezi site na ụzọ mbụ ha si eji ejiji.
Ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na ụmụ nwanyị kwesiri iyi uwe ọ bụla ha mara na ịnweta ya ngwa ngwa n'Ịntanet.
Buddhatrends bụkwaụlọ nkwụsịtụ maka Ndị Mmụọ Nanị Free n'ebe ahụ:ndị Artists, Ndị njem, Bohemia, Hippies, na ụmụ nwanyị niileonye achọghị ihe ọzọma gosipụ ha mma vibes site na ụdị ha pụrụ iche.Mkpụrụ obi nwere onwe anyị n'ime anyị na-achọ nnwere onwe n'ihe ọ bụla anyị na-eme, karịsịa otú anyị si eburu onwe anyị. Kedu ụzọ ọzọ kachasị mma isi gosipụta ezi onye gị karịa otú i si eji ejiji na otú i si ele anya. Buddhatrends abụghị naanị ahịa maka ndị Wanderers kama ọ bụ nduzi ndụ maka ndị inyom a na-amụba n'oge a, ndị maara otú e si eme nkwupụta ha chọrọ n'ezie.
Na Buddhatrends, anyị kwenyere na nnwere onwe gị ịhọrọ ụdị gị, anyị na-ejikwa oge gị, nkasi obi na nke gị, mara. Ya mere, anyị na-atụgharị ụwa ịchọta ngwaahịa ndị kachasị mma iji gbakwunye na nnakọta anyị maka gị, ihe ndị na-etinye mkpụrụ obi. Anyị na-emepụta nanị ngwaahịa ndị na-amasị anyị maka ọdịdị ha, njirimara, ịdị iche, na nkasi obi. Nchịkọta anyị na-eme ka ị gbasaa ụdị ụdị gị, ma ị gaghị ahụ ihe ọ bụla na-eme ka ejiji na Buddhatrends n'ihi anyị kwenyere na ị dị iche iche, na i kwesiri nnwere onwe ime nhọrọ ma ọ bụ gị ka ịmepụta anya nke dabara n'àgwà gị!
E wezụga inyere gị aka ịchọta ihe kachasị mma gị na ụdị ị pụrụ iche, anyị na-agbasi mbọ ike ịzụta ihe ọ bụla ị ga-enweta. Ọ bụ ihe kacha mkpa anyị nyere gị ezigbo ndị ọrụ ahịa, nhazi usoro ọsọ ọsọ, oge ezumike kwesịrị ekwesị, na iwu nkwụghachi azụ na-enweghị isi.
Anyị na-atụle nzaghachi gị, ma na-akwado ma ọ bụ na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ mgbe niile iji melite ahụmahụ ịzụ ahịa gị na anyị.